MAQAAL XIISO LEH: Soomaaliya xiriir ma la samaysan kartaa Israel! | HalQaran.com
Home Opinion MAQAAL XIISO LEH: Soomaaliya xiriir ma la samaysan kartaa Israel!
MAQAAL XIISO LEH: Soomaaliya xiriir ma la samaysan kartaa Israel!
Maqaal (Halqaran.com) – Intaynaan ka jawaabin su’aashaas, bal marka hore aan iswaydiino waddamada xiriirka la leh Israel iyo waddamada aan la lahayn iyo inta waddan oo Qaramada Midoobay ku jira.
Qaramada Midoobay waxay ka kooban tahay 193 waddan. Israel waxaa xiriir la leh 163 waddan oo ku jira Qaramada Midoobay. 30-ka waddan ee soo haray oo xiriirka la lahayn Israel, 17 ka mid ah waxay ku jiraan ururka Carabta, 13-ka kalana waxay isugu jiraan waddamo ku jira ururka Islamka iyo, kuwo ah haraadigii shuuciyaddii xilligii Midowga Soviet-ka, sida Kuuba, Waqoyiga Korea, iwm.
Waddamo Carab iyo Isam ah oo xiriir la leh Israel
Xataa waddamada ku jira ururka Carabta uma wada midaysna in la qaadaco Israel, ama aan la aqoonsan oo safaarado la is waydaarsan, Passoprt-kooda lagu gelin Israel. Waxaa jira waddamo Carab ama Islam ah oo ay ka mid yihiin Masar, Jordan, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Turkiga oo xiriir diplomaasiyadeed oo toos ah la leh Israel, ama xiriir dadban la leh.
Ma jirtaa dhib toos ah oo dhex yaal Somaaliya iyo Israel?
Diin ahaan iyo siyaasad ahaan Soomaaliya iyo Israel waxaa u dhexeeya faraq muuqda, laakiin waddamada caalamka intooda badan sidaas oo kale bay Soomaaliya u kala duwan yihiin xagga diinta, siyaasadda, midabka, luqadda, iwm, oo taasi ma aha wax Israel ku gaar ah. Sidaas oo ay tahayna Soomaaliya xiriir bay la leedahay waddamadaas aan nooga fogayn Israel.
Haddaba, iyadoo waligeed uusan jirin xiriir toos ah oo ka dhexeeyay labada dal haddana xiriirka Soomaaliya iyo Israel wuxuu aad u xumaaday markii Soomaaliya ku biirtay ururka Carabta iyo markii dawladda Soomaaliya ay haysay guddoonka ururkii OAU-da, xilligaas oo ay ol-ole wayn u gashay sidii waddama ka tirsan ururk midowga Africas looga jari lahaa Israel. Ol-olahaasna waxaa dabada ka riixayay ururka Carabta.
Sideedabana, sababta Soomaaliya aysan xiriirka ula lahayn Israel marna ma ahayn dhib labada waddan toos usoo kala gaaray ee waxay ahayd siyaasad ku salaysan qadiyadda Falastiin iyo mowqifka ururka Carabta iyo kan ururka Islamka oo ay Somaaliya ka mid ahayd, mowqifkaas oo ilaa iyo hadda ah inta Israel ka haysato dhul Carbeed ama magaalada Quddus aan xiriir lala yeelan Israel lana aqoonsan. Mowqifkaas oo badanaa waddamada Carabtu aysan daacad ka ahay waxba kama beddalin qaddiyadda Falastiin, tan Qudus, iyo dhulka Israel ka haysato Syria midna.
Waxaan is leeyahay haddii waddamada Carabtu xiriir toos ah la lahaan lahayd Israel waxaa dhici kartay in dagaal la’aan wax walba lagu xallin lahaa oo sidii qaddiyaddii Siinaay loo xalliyay oo kale loo xallin lahaa tan Falastiin iyo tan Quddus.
Laakiin ilaa 1974-tii wax badan baa is beddalay oo Israel way sii xoogaysatay Carabna waa sii bur-burtay oo sii kala fogaatay siyaasad ahaan. Sidoo kale, waddamadii Carbta ayaa iyagoo aan xiriir toos ah la lahayn Israel haddana u kala dhuunta oo ku tartama sidii ay si qarsoodi ah u la kulmi lahaayeen siyaasiyiinta iyo madaxda Israel. Mararka qaarkoodna waxaaba dhex mara xiriir ganacsi.
Tan kale, maadaama qaar ka mid ah waddamadda ururka Carbta ugu awood badan xag dhaqaale, xag siyaasadeed, iyo xag ciidanba ay xiriir toos la leeyihiin, qaarna la leeyihiin xiriir aan toos ahayn haddana aan qarsanayn, maxaa kallifaya in Somaaliya ku sii dhaqanto siyaasad waddamadii hormuudka u ahaaba aysan ku dhaqmin.
Sidaa awgeed, waxaa aniga ila habboon in dawladda Somaaliya dib u samayso daraasado looga baaraan degayo sida ugu wanaagsan oo loo hormarin karo danaha Soomaaliya iyo xiriirka ay la leedahay waddamada caalamka oo dhan, iyadoo aan waddana gaar loo takoorayn. Ma aha inaan si indha la’aan ah aan isaga daba joogno siyaadda waddamo Carabta, gaar ahaan iyadoo laga ogyahay in qaar ka mid ah waddamada carabta ay rabaan inay kala jar-jaraan Soomaaliya.
Taas macnaheedu ma aha in haddii Soomaaliya xiriir la yeelata Israel aysan ka hadli karin qadiyadda Falastiin ama maqaamka Quddus, ama dhulka ay ka haysato Siiriya, laakiin waxaan hubaa inaan wax hadda Israel xoog looga qaadi karo aysan jirin balse ays suurogal ahaan lahayd haddii cilaaqaad wanaagsan iyo xiriir toos ah lala lahaan lahaa ay dhici kartay in la isu soo dhowaado, ka dibna xal waara laga gaaro qaddiyadaha taagan oo dhan.
Waddamada Carabta ee hodanka ah maanta iyagaa ah cadowga kowaad ee Carabta iyo kann caalamka Islaamkaba. Somaaliyana inay kuwaas iska dabo joogta waa loo dhaamaa. Waxaa laga yaabaa in Israel uga waxtar roonaato Somaaliya 21-ka waddanoo kale oo ku jira ururka Carabta.
Kenya, Itoobiya, iyo waddamada Afirka badankoodu xiriir bay la leeyihiin Israel. Maxaa Soomaaliya hortaagan?
Ugu dambayn, waxaan aaminsanahay goor ay noqotaba in Soomaaliya aysan huri doonin inay xiriir la samaysato Israel, waayo siyaasadda dameeri dhaan raacdayda ah ma aha danta Soomaaliya ee la iska daba joogo waddamo iyaguba u kala dhuunta Israel.
Siyaasadda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah waa inay ka madax banaanaato aragti dhow oo aan maslaxad ugu jirin Soomaaliya.
Marka waxaa habboon in hadda la sii bilaabo daraasadahaas maadaama ay dhowr sano qaadan karto in si buuxda loo dhamays tiro daraasadda loogana feejignaado wax kasta oo qaldami kara.
Somalia xiriir ma la samaysan kartaa Israel
Xirirka Somaliya iyo Carabta
axmed November 13, 2019 At 16:42
Carabtey ka cabsanayaan, hadey israaiil xiriir la yeeshaan, sidaas waxay noqoneysaa in aadan adigu Dowlad Mowqif qaadan karta in aadanaheyn, hadey idinla joogaan yuhuuda, oo waxaan aad Mareykan iyo isgiriis ku sheegeysaan waa iyaga. Carab oo dhan xiriir ayey la leedahay, waayo carabta iyo iyaga laba odey oo walaala ah baa kala dhaley, waa Xaam iyo Saam. hadaba inagu diinta qalad baanka fahamsan nahay, wuxuu yiri natayaahuu, sadex dowlo oo carab ah, madaxdoodu hadey dhintaan , annaga ayaa qaadaneyna oo waan soo raadsaneynaa meydkooda, macneheedu waa maxay? waa reer banii israiil, . hadaba yaan been la idiin sheegin, jaahilnimo ayaa ina haysa.